I-Hydrogen bomb kunye neBhomu ye-Atomic
Qondani umahluko phakathi kwebhobho ye-athomu kunye nebhosi le-nyukliya
Ibhomu le-hydrogen kunye nebhomu ye-athomu zimbini iintlobo zezixhobo zenuzi, kodwa ezi zixhobo zombini zihluke kakhulu. Ngokucacileyo, ibhomu ye-athomu iyisisombululo se-fission, ngelixa ibhomu le-hydrogen isebenzisa i-fission ukuze inikwe amandla amandla okuphendula. Ngamanye amazwi, ibhomu ye-athomu ingasetyenziselwa njengento yokubangela ibhomu le-hydrogen.
Khangela ingqalelo kwintlobo nganye yebhomu kwaye uqonde ukubahluko phakathi kwabo.
I-Atomic Ibhomu Inkcazo
Ibhomu ye-athomu okanye i-A bhomu iyisixhobo senyukliya eqhuma ngenxa yamandla angaphezulu akhululwe yi-fission yenyukliya . Ngenxa yesi sizathu, olu hlobo lombhobho luyaziwa njengombhobho we-fission. Igama elithi "i-atomic" alilona lichanekile ngokucacileyo, kuba liyi-nucleus ye-athomu echaphazelekayo kwi-fission (iprotoni zayo kunye ne-neutron), kunokuba i-athomu yonke okanye i-electron yayo.
Izinto eziphathekayo ezinokwenziwa kwefission (izinto eziphathekayo) zinikwe ubunzima obukhulu, ngelixa i-fission ivela kuyo. Oku kuya kuphunyezwa ngoxinzelelo lwezinto eziphambili ngokusebenzisa iziqhuqhuma okanye ngokudubula enye inxalenye yesigxina esincinci kwisinye. Izinto eziphathekayo ziphucula uranium okanye iputonium . Ukuveliswa kwamandla okuphendula kusenokulingana neyithani yeTTT ukuqhuma ukuya kuma-kilotons angama-500 e-TNT. Ibhokhwe iphinda ikhiphe iziqhekeza ze-fission zomsakazo, ezibangelwa kwi-nuclei enzima ezahlukileyo.
Ukuwa kweNyukliya kubandakanyeka kakhulu kwiintlobo ze-fission.
I-Hydrogen Ibhomu Inkcazo
Ibhomu le-hydrogen okanye i-H ibho ihlobo lwe-zixhobo zenyukliya eziqhuma ngamandla amakhulu okhutshwe yi-fusion yenyukliya . Iibhobho ze-Hydrogen nazo zingabizwa ngokuba zixhobo ze-nyukliya. Amandla avela ekuhlanganiseni i-isotopes ye-hydrogen-deuterium ne-tritium.
Ibhomu le-hydrogen lixhomekeke kumbane okhutshwe kwi-fission response to heat and compress i-hydrogen ukuze ibangele ukuxhamla, nto leyo inokuvelisa iimpendulo ezongezelelweyo ze-fission. Kwisixhobo esikhulu se-nyukliya, malunga nesiqingatha sesivuno seso sixhobo sivela kwi-fission ye-uranium epholileyo. Ukuphendulwa kokuxuba akubangeli negalelo lokuwa, kodwa ngenxa yokuba ukusabela kubangelwa yi-fission kwaye kubangela ukuqhuma okuqhubekayo, ii-b-bbhobho zivelisa ubuncinane ukuwa njengeibhomu ze-athomu. Iibrobhogen ze-Hydrogen zinokuvelisa kakhulu kuneemibhobho ze-athomu, ezilingana ne-megatons ze-TNT. I-Tsar Bomba, isixhobo senyukliya esikhulu kunazo zonke esiye saqhoxiswa, ibhobho ye-hydrogen ene-50 megaton isivuno.
I-Atomic Bomb kunye nebhodi ye-Hydrogen
Zombini iintlobo zezixhobo zenyukliya zikhulula amandla amaninzi kummandla omncinci womcimbi kwaye zikhulule uninzi lwawo amandla ukusuka ku-fission, kwaye zivelise ukuwa kwe-radioactive. Ibhobho ye-hydrogen ine-isivuno esiphezulu kwaye sinesisombululo esinzima ngakumbi sokwakha.
Ezinye iintlobo zeeNkliya zixhobo
Ukongeza kwiibhomu ze-athomu kunye neebhomu ze-hydrogen, kukho ezinye iintlobo zezixhobo zenukliya:
ibhomu le-neutron - Ibhomu le-neutron, njengombhobho we-hydrogen, isikhali se-nyukliya. Ukuqhuma kwimbhobho ye-neutron kuncinci, kodwa kukhululeka inani elikhulu le-neutron.
Nangona iindawo eziphilayo zibulawa yilo hlobo lwedivayisi, ukuwa okuncinane kuveliswa kwaye izakhiwo zenyama ziyakwazi ukuhlala zihambelana.
ibhoti enetyuwa - Ibhokhwe yelyuri ibhokliya yenyukityi ejikelezwe yi-cobalt, igolide, nezinye izinto ezifana ne-detonation ivelisa inani elikhulu lokulahla kwe-radioactive. Olu hlobo lwezixhobo luyakwazi ukukhonza njengesixhobo "sokuhlaselwa", ekubeni ukuwa kwamandla ekugqibeleni kunokugqitywa ekugqibeleni ukuthengiswa kwehlabathi.
Ibhokhwe ye-fusion ecocekileyo - Iibhomu ze-fusion ezichanekileyo zixhobo zamandla enyukliya ezivelisa ukusabela ngaphandle kokuncediswa kwe-bission fission. Olu hlobo lombhobho aluyi kukhulula ukuwa kwe-radioactive enkulu.
Isixhobo se-pulse ye-electromagnetic (EMP) - Le bhomu ihloselwe ukuvelisa i-pulse ye-electromagnetic pulse, engaphazamisa izixhobo zombane. Isixhobo senyukliya esikhishwe emoyeni senza i-pulse electromagnetic pulse spherically.
Injongo yesixhobo esinjalo kukulimaza i-electronics kwiindawo ezibanzi.
ibhomu ye-antimatter - Ibhomu ye-antimatter iya kukhulula amandla ekuphenduleni kokutshabalalisa okubangelwa xa umcimbi kunye ne- antimatter bebenzisana. Isixhobo esinjalo asizange sikhiqizwe ngenxa yobunzima bokuvelisa ubuninzi be-antimatter.
Inkcazo yeNkcazo kunye neenkqubo (iKhemistry)
I-Atom kunye ne-Atomic Theory - Isikhokelo soFundo
IiVitamin Chemical Structures
Iimpawu zeMfazwe eziPhambili kunye eziMbi kakhulu ngeMarine Corp
Konke malunga neManquer
I-Chemical Piranha Solution
Yintoni eyahlukileyo phakathi koKhuselo kunye nokuCandwa?
I-St. Louis College ye-Pharmacy Admissions